Hogaamiyaasha Islaamka oo Taageeray Falastiin
Boqorka Salman oo shir gudoominaya Shirweynihi Madaxda Islaamka ee Maka ka dhacay. Saudi Arabia, June 1, 2019.
Hogaamiyaasha 57-da waddan ee xubnaha ka ah Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa cambaareeyay go,aanki muranka badan dhaliyay ee ay dowladda Mareykanka magaalada Qudus ugu aqoonsatay caasimadda Israil.
Bayaan ay Sabtida maanta ah kasoo saareen gabagabadi shir ay ku yeesheen magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudiga, ayay dalalka Iskaashiga Islaamka ugu baaqeen wadamada safaaradahooda u raray magaalada Qudus ay dib uga fakaraan istaraatiijiyadooda, taasoo xadgudub weyn ku ah bay yiraahdeen Qaanuunka Caalamiga ah. Waxa soo jeediyeen in la qaadaco dalalka safaaradahooda u raray Qudus.
Madaxda dalalka Islamka oo ay ka maqnaayeen madaxweynayaasha Turkiga iyo Iran, ayaa sidoo kale kulankan lagu taageeray dadka reer Falastiin, xilli ay soo dhawdahay inuu Mareykanka ku dhawaaqo qorshe uu ugu magacdaray “Heshiiska Qarniga” oo ku saabsan xal laga gaaqo khilaafka Israil iyo Falastin, balse la sheegay in qorshahani uu u daneynayo Israil.
Dhanka kalana, dalalka xubnaha ka ah ururka Iskaashiga Islaamka, ayaa taageero u muujiyay Sacuudiga oo uu dagaal dhinaca siyaasadda ah kala dhaxeeyo Iran.
Boqorka Sacuudiga Salman Cabdulcasis ayaa shirka ka sheegay in weeraro uu sheegay in ay Iran ku qaadday maraakiib shidaal waday oo uu Sacuudiga leeyahay ay keeni karto halis ku timaada marin biyoodka gacanka Khaliijka.Iran ayaa xoog leh u beenisay eedaha ah uga yimid Sacuudiga.
Shirki dalalka Iskaashiga Islaamka ayaa gaba gabo u ahaa saddex shir oo tan iyo Khamisti ka dhacay magaalada Makka kuwaas oo ay si deg deg isugu wacday boqortooyada Sacuudiga, dalalka xubnaha ka ah Golaha Iskaashiga Khaliijka, kan Jaamacadda Carabta iyo ururka Iskaashiga Islaamka. Dhamaan waxaa xooga lagu saaray khatar uu Sacuudigu sheegay in ay uga soo socoto Iran.